सबैको साझा जिज्ञासा : बिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? • Janaboli
सबैको साझा जिज्ञासा : बिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
एजेन्सी । महिला होस् या पुरुष अहिलेको जमानामा विवाह अघि नै धेरैले सेक्सयल रिलेसन राखिसकेका हुन्छन् । यौनसम्पर्क राखेकाहरुका मनमा विवाहको समय आफ्नो पनि वा पत्नीले थाहा पाउने त हैन भन्ने भय राखेका हुन्छन् । धेरै युवतीमा यो त्रास हुन्छ । विवाह अगाडि यौनसम्पर्क राखे–नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए–नआएको वा दुखे–नदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे–नफाटेको, पछाडिसम्म खुले–नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए–नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
तर माथि उल्लेखित सोच गलत हुन् । खास गरी उमेर पुगेपछिमात्र विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको अहिलेको समयमा माहिलाको योनीको मुखमा बाल्यकालदेखि वा जन्मदेखि रहने जालो यौनसम्पर्कबाहेक दौडधुप, खेलकुद, पौडी, साइकल चलाउने वा अन्य यस्तै गतिविधिका कारणले पनि फुट्न सक्ने हुनाले पहिलो यौनसम्पर्कको बेलामात्रै यो फुटेर रगत आउनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य मान्न सकिँदैन । त्यस्तै पुरुषको लिंगको छाला यौनसम्पर्क पछिमात्रै फाट्छ वा खुल्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । त्यसकारण विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे–नराखेको हुरा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सेक्स गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले पछि थाहा पाउन सक्दैन ।
यौनसम्पर्क राख्दा योनी खुकुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । योनी आवश्यकताको बेला रक्तसञ्चालनको कारण आफैँ खुकुलो र कसिलो हुने अंग हो । महिलालाई यौन उत्तेजना नभएको बेला योनीमार्गमा एउटा औँला पनि पसाउन अप्ठ्यारो हुन सक्छ भने यौन उत्तेजना भएको बेला कुनै पनि आकारको लिंग यसभित्र पस्न सक्छ । अझ बच्चा पाउने बेलामा बच्चा पाउने हदसम्म पनि खुकुलो हुन सक्छ । यो सबैले बुझेको कुरा भयो । जसरी आवश्यक भएको बेलामा योनी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौनसम्पर्कपछि योनीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र ? हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन ।
बेलुका नुहाउँदाका यी फाइदाहरु, छालाको इन्फेक्सन देखि आरामदायी निद्रा समेत
बच्चाहरु लाई मोबाइल नदिनुहोस् हुन्छ यस्तो खतरा
डण्डीफोर हटाउन यसो गर्नुहोस्